नियमित योग अभ्याँसका चामत्कारिक ९ फाइदा, सक्दो शेयर गरौं | Hamro Doctor News
मंगलबार, १३ माघ २०७७ /
बागलुङमा हात्तीपाइले रोगको बिरामी फेला, १० जनामा जीवाणु देखियो
विश्वभर कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या १० करोड नाघ्यो
चिसोबाट लाग्ने रोगबाट जोगिन सूर्य स्नान
कोरोना विरुद्धको खोप धनगढी पुग्यो, १६ हजार २ सय ९३ जनालाई लगाइने
मेक्सिकोका राष्ट्रपति आन्द्रेसमा कोरोना संक्रमण पुष्टि
नियमित योग अभ्याँसका चामत्कारिक ९ फाइदा, सक्दो शेयर गरौं
काठमाडौं । महादेवबाट सप्तऋषि हुँदै विकास भएको भनिएको प्राचिन योग विज्ञान हिजोआज धेरैले बुझेका छैनन् वा बुझाइएको छैन । योग शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रोगको निवारणमात्र होइन एउटा अनुशासित र मर्यादित जीवनपद्धति पनि हो । तर, आधुनिक समाजले लामो समयसम्म ग्रहण गर्न नसकेको योग सभ्यता विस्तारै फेरी विश्वभर फैलँदै छ । ऋषिमुनीहरुले तपस्या गरेका हिमलाय श्रींखलाका सन्तति भएर पनि नेपालले योगको प्रवद्र्धनमा खासै कदम चाल्न सकेको छैन । भारत लगायत युरोप र अमेरिकामा धेरै हदसम्म प्रवद्र्धन भैसकेको योग अभ्याँस र संस्कारलाई नेपालमा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले वर्षमा दुई दिन योग दिवस मनाइन्छ । जुन २१ म विश्व योग दिवस र माघ १ गते राष्ट्रिय योग दिवसका रुपमा योगका बारेमा सतही छलफल हुने गरेको छ । तर, यसलाई व्यापक र जनजनमा पुर्याउने गरी भने काम हुनसकेको छैन ।
योग अभ्याँसका ९ फाइदाहरु यसप्रकार छन् । जुन तपाईंले आजसम्म थाहा नपाएको हुनसक्छ ।
१. लचकता, शक्ति र संरचनाका लागि
दैनिक योग अभ्याँसले शरीरका अंग र भागहरुमा लचकताको वृद्धि गर्छ । यसले एउटा लय निर्माण गर्छ जुन आनन्ददायक हुन्छ । शरीरको हात, पाखुरा, काँध, खुट्टा र जोर्नीहरुको संरचनामा शक्ति र लचकता सिर्जना गर्छ । र, यो जुनसुकै अवस्था र उमेरका मान्छेले क्षमता अनुसार अभ्याँस गर्नसक्छन् ।
दैनिक केही मिनेटको योगले तपाईंलाई स्फूर्त र शक्तिशाली बनाइदिन्छ ।
२. समग्र व्यायाम र तन्दुरुस्ती
धेरै मान्छेले जब व्यायाम र तन्दरुस्तीका बारेमा सोच्छ सबैभन्दा पहिले उसले जीम सम्झन्छ । तर, जीमले मात्र होइन नियमित योगअभ्याँसले पनि आधुनिक व्यायामलेझैं तौल घटाउँछ र मान्छेलाई तन्दुरुस्त देखाउँछ । घरमै बसेर, शान्त वातावरणमा र उन्मुक्त भएर गरिने योग जीमको अभ्याँसभन्दा कयौं गुणा बढि लाभप्रद हुन्छ ।
३. तौल गिरावट
तौल घटाउने नाममा कठिन आसन गर्नुपर्छ भन्ने हुन्न । नियमित रुपमा गरिने सहज आसन र क्रियाहरुले पनि शरीरको मेटावोलिक प्रणालीमा बल प्रदान गर्छ जसले शरीरमा रहेको फ्याट घटाउन मद्दत गर्छ । शरीरमा यसले हर्मोनको सन्तुलन निर्माण गर्छ जसले मान्छेको शरीरलाई सामान्य बनाइराख्छ । यसले तनाव न्यूनीकरणको हर्मोन समेत उत्पादन गर्छ ।
४. उर्जा बढाउन
दैनिक केही मिनेटको योगअभ्याँसले मानिसलाई उर्जा प्राप्त हुन्छ । जुन हिजोआजको व्यस्त र प्रतिस्पर्धी दुनियाँमा सबैलाई आवश्यक छ । योग अभ्याँसले शरीरमा निरन्तरको स्फूर्तिमात्र होइन निरन्तर उर्जासमेत प्रदान गरिरहन्छ । शरीर र स्वासको अलग्गै सन्तुलनले ताजा अनुभूति गराइरहन्छ । दैनिक अभ्याँसले मानिसको मुख्य उर्जा उत्पादन गर्ने चक्र सँग साक्षात्कार गराउँछ जसले अन्स्करणको शक्तिलाई महशुस गराउँछ ।
५. तनाव न्यूनिकरण
पछिल्लो समय विश्वका कतिपय मुलुकका कार्यालयहरुमा लन्च(खाजा खाने)को समयमा योग अभ्याँस गराउन थालिएको छ । जसबाट कर्मचारीहरु तनावमुक्त हुने विश्वास गरिन्छ । दैनिक योगको आसन, प्राणायम र ध्यानले मानिसको तनाव निवारण गर्नमात्र नभई मुटुको चाल सन्तुलित गर्छ । तनाव र अनिद्राबाट मुक्ति पाउने सबैभन्दा सजिलो उपायका रुपमा योगलाई लिइन्छ ।
६. गतिलो स्वासप्रश्वास
हरेक योग अभ्याँसमा श्वासप्रश्वासको गहिरो र शान्त प्रकृयाहरु हुन्छन् । प्राणायम भनिने योगी श्वासप्रश्वास क्रिया लामो र मन्द हुन्छ । यसले मानिसलाई आनन्दित र सुन्तुलित महसुश गराउँछ । यसले आत्वविश्वास र शान्त स्वभावको पनि बानी बसाल्छ भने फोक्सोलाई उर्जा र शक्तिले भर्छ । जसले गर्दा योगका कारण स्वास प्रश्वास प्रकृया धेरै नै सहज, आनन्दित र सरल लाग्न थाल्छ ।
७. खुशी हुन
दैनिक योगअभ्याँसले मानिसलाई संवेदनात्मक ढंगबाटै खुशी प्रदान गर्छ । भर्खरै भएको एक अध्ययनले पनि नियमित योग र ध्यानले मानिसको खुशी सम्बन्धित हार्मोनको तहलाई बढाइदिने दावी गरेको छ । त्यस्तै योग अभ्याँसले डिप्रेसन र छट्पटी गराउने हार्मोनको तहलाई पनि घटाइदिन्छ । दैनिक कम्तिमा १५ मिनेटको योगअभ्याँसले मश्तिष्क र मनको मधूरतालाई बढाउँछ र खुशी तुल्याउँछ ।
८. एकाग्रतामा वृद्धि र स्पष्ट सोचाई
योग अभ्याँसमा श्वासप्रश्वासमा एकाग्रता बढाउनुपर्छ । जसले गर्दा श्वासप्रश्वासले मश्तिस्कलाई शान्त बनाउँछ र आनन्दचित्त बनाउँछ । मश्तिष्कको समग्र क्षमतालाई पनि यसले वृद्धि गरिदिन्छ । दैीनक केही मिनेटको ध्यानलेमात्र पनि मानिसको कुनै काम प्रतिको लगाव र एकाग्रता बढाइदिन्छ । मानसिक र शारीरिक तनाव घटेपछि मान्छेले आफ्नो सोचाई र मनका अनेकन वृत्तिहरुमाथि नियन्त्रण हासिल गर्छ । यसले सोचाईको गुणस्तरलाई वृद्दि गर्नुका साथै तिक्ष्णता प्रदान गर्छ ।
नियमित योग अभ्याँसले तन्दुरुस्ती बढाउन सहयोग गर्छ, मुटुको चाल सुन्तुलनमा ल्याउँछ, तनावको दर घटाउँछ र खुशी प्रदान गर्छ । यो सबै पक्षले मानिसको आयु वृद्धि हुन्छ । मुटुरोगको जोखिम न्यूनीकरणका साथै फोक्सोको समेत आयु वृद्धि गर्दै योगअभ्यासले दीर्घजीवी बनाउँछ । भर्खरैको एक अध्ययनले योग, ध्यान र प्राणायमले बुढो बनाउने वा देखाउने हार्मोनको वृद्धिदरलाई पनि न्यूनीकरण गर्छ । जसले गर्दा योग अभ्यास गर्नेहरु सँधै ताजा र युवा देखिन्छन् भने धेरै बाँच्नसक्छन् ।
Last modified on 2019-11-01 16:11:51
यसकारण जरुरी छ योग अभ्यास
योगासन र प्राणायाम: जसले रुघाखोकीबाट जोगाउन सक्छ
योगः मानिसको तनाव कम गर्नेदेखि समाजमा घुलमिल गराउने काम गर्छ
प्राडा. भगवान कोइरालाको ह्याम्स हस्पिटलमा शल्यक्रिया
भरतपुर केन्द्रीय अस्पतालमा आजदेखि आँखा रोग उपचार सेवा सुरु हुँदै
के हो जोर्नी प्रत्यारोपण ? प्रत्यारोपणपछि बिरामीले के कस्ता कुरामा ध्यान दिने
भरतपुर अस्पतालमा उपचाररत गैंडाकोटका ५५ वर्षीय कोरोना संक्रमित पुरूषको मृत्यु
किन हुन्छ मधुमेह ? यसबाट जोगिन के गर्ने ? डाक्टरहरुको सुझाव यस्तो छ : डाक्टर अंशुमाली जोशी (मधुमेह विषशेज्ञ )
बालबालिकामा देखापर्ने मानसिक समस्याहरु
Samples Tested - २०,४८,११३